CBD & Delta 8 THC အကြောင်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဖြေများ
၀ က်ဘ်ပတ်လည်မှ Delta 8 THC နှင့် Delta 10 THC အကြောင်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာမေးခွန်းများနှင့်အဖြေများ
Shishira Sreenivas မှ
Neha Pathak, MD မှဆေးပညာအရပြန်လည်သုံးသပ်သည် ဇူလိုင်လ 08, 2021 အပေါ်
၎င်းသည်ပုံမှန်ဆေးခြောက် (Delta-9-THC) နှင့်မည်သို့နှိုင်းယှဉ်သနည်း။
Delta-8 THC (သို့မဟုတ် Delta-8-tetrahydrocannabinol) သည်လျှော်ပင်နှင့်ဆေးခြောက် (ဆေးခြောက်) ပင်များတွင်ခြေရာလေးများတွင်တွေ့ရသည်။ ၎င်း၏ကျော်ကြားမှုသည်မြင့်တက်နေပြီးစျေးဆိုင်ပေါင်းပင်များမှသည်ကုန်စုံစတိုးဆိုင်များအထိနေရာတိုင်းတွင်တွေ့နိုင်သည်။
Delta-8 အတွက်ဒီလောက်ဝယ်လိုအားကဘာကြောင့်မြင့်တက်နေတာလဲ။ အစပြုသူများအတွက်၎င်း၏ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံသည်ဆေးခြောက်တွင်တွေ့ရသောအဓိကစိတ်ကြွစေသောဒြပ်ပေါင်း Delta-9-tetrahydrocannabinol (Delta-9-THC) နှင့်ဆင်တူသည်။ အဲဒါကမင်းကို "အမြင့်" ရောက်စေတယ်။
Delta-8 နှင့် Delta-9 နှစ်ခုစလုံးသည် THC ပုံစံများဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်လူတွေက THC ကိုရည်ညွှန်းတဲ့အခါသူတို့ကများသောအားဖြင့်ဆေးခြောက်မှာအမြင့်ဆုံးတွေ့ရတဲ့ Delta-9 ကိုဆိုလိုတာ။ နှစ် ဦး စလုံးသည် euphoric နှင့် fuzzy ခံစားချက်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသော်လည်း Delta-8 သည်ပိုမိုပျော့ပျောင်းစေသည်။
တကယ်တော့ Delta-8 ကို“ ဆေးခြောက်” သို့မဟုတ်“ diet weed” ဟုမကြာခဏရည်ညွှန်းလေ့ရှိသည်။ ကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့်အိပ်ငိုက်ခြင်းကဲ့သို့သောအခြားအဖြစ်များသော THC ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသည်လည်းအစွမ်းထက်သည်။
Delta 8 THC သည်တရားဝင်သလား။
Delta-8 ၏လူကြိုက်များမှုကြီးထွားလာရခြင်း၏နောက်ထပ်အကြောင်းအရင်းမှာအလွန်တင်းကျပ်သော THC နှင့်မတူဘဲ Delta-8 သည်ပြည်နယ်အများစုတွင်တရားဝင်အသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်အမေရိကန်တစ်ဝှမ်းလုံးတွင်စိုက်ပျိုးရန်တရားဝင်ဖြစ်သော CBD မှရရှိသော CBD မှထုတ်ယူသောကြောင့်ဖြစ်သည်
သို့သော် Delta-8 သည်တရား ၀ င်မီးခိုးရောင်ဧရိယာတွင်ထိုင်သည်။ Hemp ၏တရား ၀ င်သည်ပြည်ထောင်စုလယ်ယာဥပဒေ (၂၀၁၈ ခုနှစ်လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်အာဟာရတိုးတက်ရေးအက်ဥပဒေ) ဟုခေါ်သောလျှော်ပင်နှင့်၎င်း၏အထွက်တိုးပစ္စည်းများကိုထိန်းချုပ်ထားသောအရာများစာရင်းမှဖယ်ရှားသည်။ အကြောင်းရင်း - Hemp ၏ THC ပမာဏ (၀.၃%အောက်) ဥပဒေကြမ်းတွင်မည်သည့်နေရာတွင်မဆို Delta-2018 ကိုဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါ။ Hemp ထောက်ခံသူများနှင့်၎င်းကိုရောင်းသောအခြားသူများသည်များသောအားဖြင့်အသက်ကန့်သတ်ချက်မရှိသော Delta-0.3 ထုတ်ကုန်များကိုတရား ၀ င်ဈေးကွက်သို့တရားဝင်ရောင်းချခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ယခု၎င်းသည်လျှော်လုပ်ငန်းမှအလျင်မြန်ဆုံးကြီးထွားလာသောထုတ်ကုန်ဖြစ်သည်။ မင်းပြည်နယ်ရဲ့တရား ၀ င်အခြေအနေကိုဒီမှာစစ်ဆေးနိုင်တယ်။ https://redemperorcbd.com/is-delta-8-thc-legal-in-my-state/
Delta-8 ထုတ်ကုန်များတွင်ပါ ၀ င်သောကြီးကြပ်မှုသို့မဟုတ်ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုအနည်းငယ်သာရှိသောကြောင့်ဓာတုဗေဒပညာရှင်များနှင့်အခြားသိပ္ပံပညာရှင်များသည်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုစိုးရိမ်ကြသည်။ Delta-8 ဟုတံဆိပ်တပ်ထားသောထုတ်ကုန်များတွင် THC မြင့်မားမှုအပါအ ၀ င်အညစ်အကြေးများပါ ၀ င်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် New York နှင့် Co အပါအဝင်ပြည်နယ်တစ်ဒါဇင်ခန့်ရှိသည်
မင်းဝယ်နိုင် Delta 8 THC ထုတ်ကုန်များ ဓာတ်ဆီဆိုင်များ၊ ကုန်စုံဆိုင်များ၊ ပေါင်းပင်များနှင့် vape အရောင်းဆိုင်များနှင့်အွန်လိုင်းရှိကောင်တာပေါ်တွင် ၎င်းတို့ကို gummies၊ သကြားလုံးများအဖြစ်ရောင်းချသည်။ Delta 8 vape ယမ်းတောင့်များအဆီများ၊ အချိုရည်များ၊ အသားများ၊ အဆစ်များ၊ အဖျော်ယမကာများ။
ဤထုတ်ကုန်များနှင့်၎င်းတို့၏ပါဝင်ပစ္စည်းများစာရင်းအတွက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုမရှိကြောင်းသတိပြုရန်အရေးကြီးသည်။ အမြင့်ကိုမဖြစ်စေသော CBD အတွက် Delta-8 ထုတ်ကုန်များကိုရှုပ်ထွေးရန်လည်းလွယ်ကူသည်။
Delta 8 Gummies ၅၉.၉၉ ဖြင့် ၃၉.၉၉ ဖြင့်ရောင်းချရန်ပုံပေါ်တွင်နှိပ်ပါ ၁၄ ရက်ငွေပြန်အမ်းရန်အာမခံသည်။
Delta-8 သည်သင်၏ကျန်းမာရေးကိုအလုံးစုံထိခိုက်စေသောအခါသုတေသနနှင့်သက်သေအထောက်အထားလည်းမရှိပေ။ လူများစွာသည်စိတ်ကျရောဂါနှင့်စိတ်ကြွဆေးသုံးစွဲမှုကိုကူညီရန် Delta-8 ကိုသူတို့၏ဆေးစာများနှင့် တွဲ၍ သုံးကြသည်ဟုအများစုကဆိုကြသည်။ သုံးစွဲသူများက Delta-8 သည်လည်းလုပ်နိုင်သည်ဟုဆိုသည်။
ဒါပေမယ့်ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေကအများစုကပါးစပ်ကပြောပြီးသင့်ကျန်းမာရေးကိုဘယ်လိုသက်ရောက်မှုရှိလဲဆိုတာသုတေသနမရှိတာပါ။ စင်ပေါ်မှသင် ၀ ယ်နိုင်သောကြောင့်၎င်းသည်လုံးဝအန္တရာယ်မရှိဟုမဆိုလိုပါ။
သင် Delta-8 ထုတ်ကုန်များနှင့်ဤတုံ့ပြန်မှုများကိုသတိပြုမိပါကသင်၏ဆရာဝန်ကိုချက်ချင်းပြောပါ။ အရေးပေါ်ဖြစ်လျှင် ၉၁၁ ကိုခေါ်ပါသို့မဟုတ်သင်အနီးရှိဆေးရုံတစ်ခုသို့သွားပါ။ အကယ်၍ ကလေးတစ် ဦး သည်စားလျှင်သို့မဟုတ် Delta-911 ထုတ်ကုန်များဖြစ်သော gummies သို့မဟုတ်သကြားလုံးများကဲ့သို့ချက်ချင်းဆေးကုသမှုခံယူပါ။
အခြေအနေအရပဲ။ Delta-8 သည် THC ပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။ မူးယစ်ဆေးစမ်းသပ်မှုများသည် Delta-9 ၏ခြေရာကောက်ကိုရှာဖွေလေ့ရှိသော်လည်း Delta-8 သည် THC အတွက်အကောင်းတစ်ခုအဖြစ်ပြသနိုင်သည်။ Delta-8 (သို့) Delta-9 ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လူတွေဟာသူတို့သုံးတဲ့ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးသူတို့ဘယ်လောက်ကြာကြာသုံးသလဲဆိုတာပေါ်မူတည်ပြီးကွဲပြားတယ်။
လက်ရှိတွင်စီးပွားဖြစ်ဆီးဆေးစမ်းသပ်မှုသည်ကွဲပြားခြားနားသော cannabinoids ကိုမခွဲခြားပါ။ ထို့ကြောင့်သင့်တွင်ဆေးစစ်ဆေးမှုရှိလျှင် Delta-8 ထုတ်ကုန်များကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
CBD အကြောင်း ၀ က်ဘ်တစ်ဝိုက်မှဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဖြေများ
အပန်းဖြေစရာနှင့်ဆေးခြောက်ဆေးသည်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံး၌ပြည်နယ်များတွင်တရားဝင်ဖြစ်လာသည်နှင့်အမျှမင်းရဲ့ပြည်နယ်ကဘယ်အချိန်ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုမင်းအံ့သြသွားနိုင်တယ်။ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းဆေးခြောက်တစ်ဝိုက်စကားပြောဆိုမှုနှင့်အတူလူများသည်လျှော်နှင့်၎င်း၏နာမည်ကျော် cannabinoids (cannabidiol) (CBD) ဆီသို့သူတို့၏ရပ်တည်ချက်ကိုပျော့ပြောင်းစေခဲ့သည်။
အလုံးစုံကျန်းမာရေးသည် ပို၍ လူကြိုက်များလာပြီး cannabis ယဉ်ကျေးမှုသည်ပျံ့နှံ့လာသည်နှင့်အမျှအမေရိကန်လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်ဆေးခြောက်တည်နေရာအကြောင်းလှည့်ပတ်နေသောမေးခွန်းများစွာရှိသည်။ ဆေးခြောက်နှင့် CBD ထုတ်ကုန်များနှင့် ပတ်သက်၍ လူတို့မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းအချို့အတွက်အဖြေများကိုဆက်လက်ဖတ်ပါ။
လူအများစု၏စိတ်ထဲတွင်အတွေ့ရများဆုံးမေးခွန်းများအနက်တစ်ခုမှာ“ CBD ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ ” ၎င်းကိုအကျွမ်းတ ၀ င်မရှိသောလူများက၎င်းသည်ဆေးခြောက်မှလာသည်ကိုဆေးခြောက်တွင်တွေ့ရသော cannabinoid အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည့် tetrahydrocannabinol (THC) နှင့်မကြာခဏရှုပ်ထွေးစေသည်။
လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာအကြီးဆုံးမေးခွန်း CBD ထုတ်ကုန် သူတို့သည်သင့်ကိုအမြင့်သို့ရောက်စေသည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်။ ဒီအတွက်ရိုးရှင်းတဲ့အဖြေက no ။ ၎င်းသည် cannabinoid ဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်ပေါင်းပင်လုပ်ခြင်းကိုသင့်ကိုမြင့်မားစေသည်ဟုမခံစားရပါ။ အမှန်တော့၎င်းသည် THC ကိုအမှန်တကယ်ဆန့်ကျင်သည်။
လွန်ခဲ့သောငါးနှစ်တာကာလအတွင်းဆေးခြောက်ကိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်အပန်းဖြေသုံးရန်ပြည်နယ်များစွာရှိခဲ့သည်။ ပေါင်းပင်ဆီသို့သဘောထားပြောင်းလဲခြင်းသည်ဆေးခြောက်ကိုစိတ် ၀ င်စားသူများစွာအားဖက်ဒရယ်အဆင့်တွင်တရားဝင်ဖြစ်စေလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ချက်ပေးထားသော်လည်းဤအရာသည်မဖြစ်ပေါ်သေးပါ။
ပြည်နယ်များစွာသည်ဆေးခြောက်ကိုအပန်းဖြေဆေးခြောက်အဖြစ်တရားဝင်ခွင့်ပြုထားသော်လည်းပြည်ထောင်စုအဆင့်တွင်တရားမ ၀ င်ဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ထို့အတွက်ကြောင့်ဆေးခြောက်ကိုတရား ၀ င်ရောင်းချသောပြည်နယ်များမှစွန့် ဦး တီထွင်သူများစွာသည်ဆေးခြောက်လုပ်ငန်းသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းကိုအလေးမထားကြချေ။
များစွာသော buzz ရှိနေသော်လည်း CBD ကိုအသုံးပြုခြင်း၏ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများကိုသတိမထားမိသောလူများစွာရှိနေပါသေးသည်။ Cannabidiol ကိုနာတာရှည်နာကျင်ခြင်းနှင့်ခေါင်းကိုက်ခြင်းကဲ့သို့သောရောဂါများစွာအတွက်သုံးသည်။ ၎င်းကိုရောင်ရမ်းမှုကိုကူညီသောကြောင့် psoriasis နှင့်နှင်းခူများအတွက်လိမ်းဆေးများတွင်လည်းသုံးသည်။ အချို့ပညာရှင်များက၎င်းသည်စိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်သောကများအတွက်ထိရောက်သောကုသမှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
မင်း CBD ထုတ်ကုန်တွေကိုဘယ်လိုယူလဲ။
ဤဖြည့်စွက်စာကိုစားရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ သင်ကပေါင်းပင်နည်းတာကိုမမြင့်ပေမဲ့အချို့လူတွေကပူပင်သောကကိုကုသတဲ့နည်းလမ်းအဖြစ်ဆေးလိပ်သောက်ဖို့ရွေးကြတယ်။ CBD ကျဆင်းခြင်းသည်အဆစ်နာနှင့်နာတာရှည်နာကျင်မှုကိုကုသရန်အသုံးပြုသောသူများအကြားရေပန်းစားသည်။ အချို့လူများကဟင်းချက်ခြင်းနှင့်မြေပဲဆီအစားထိုးခြင်းတို့ကိုဟင်းချက်ရာတွင်သုံးသည်။ ဤဖြည့်စွက်စာကို tincture (သို့) လိမ်းဆေးအဖြစ်သုံးနိုင်သည်။
၄။ Medicare သည် CBD ထုတ်ကုန်များကိုဖုံးလွှမ်းသလား။
လူတွေမှာတွေ့ရလေ့ရှိတဲ့နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုကတော့“ Medicare ကဆေးခြောက်ကိုဖုံးလွှမ်းသလား။ ” သင်ယခင်ကဖတ်ဖူးသည့်အတိုင်းဆေးခြောက်သည်ပြည်ထောင်စုအဆင့်တွင်တရားမ ၀ င်ရှိနေသေး။ Medicare သည်ပြည်သူပိုင်အာမခံဖြစ်သောကြောင့်ဆေးခြောက်ကိုမဖုံးလွှမ်းပါ။
အမှန်အတိုင်းပြောရရင်မင်းရဲ့ဆေးခြောက်ဆေးစာကိုအာမခံပေးမယ့်အာမခံပေးသူကိုရှာဖို့အခက်အခဲရှိနိုင်ပါတယ်။ ဆေးခြောက်သုံးစွဲမှုတစ်ဝိုက်ရှိအမည်းစက်များကြောင့်အာမခံကုမ္ပဏီများသည်ထိုနေရာသို့သွားရန်မကြာမီဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်မည်သည့်ဆေးခြောက်သို့မဟုတ် CBD ထုတ်ကုန်များကိုအသုံးမပြုမီအိတ်ဆောင်စရိတ်ကိုထည့်စဉ်းစားပါ။
ဆေးခြောက်သုံးတာကိုတစ်ချို့ကမျက်မှောင်ကြုတ်တာတောင်မှ၊ နာတာရှည်ရောဂါအချို့၊ ရုပ်ပိုင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချို့ကိုကုသရန်သုံးသည်။ ဆရာဝန်များက schizophrenia၊ ကင်ဆာ၊ အစာစားချင်စိတ်ဆုံးရှုံးခြင်း၊ အိပ်မပျော်ခြင်း၊ တက်ခြင်း၊ ကြွက်သားများတောင့်တင်းခြင်းနှင့်နာကျင်ခြင်းကိုကုသရန်သုံးသည်။
Broad Spectrum CBD 79.99 ကို ၄၉.၉၉ ဖြင့်ရောင်းချသည်
ဆေးခြောက်သုံးနေသောလူနာများအတွက်ကြီးမားသောစိုးရိမ်ပူပန်မှုသည်၎င်းတို့၏အလုပ်အကိုင်အရည်အချင်းပြည့်မီမှုကိုထိခိုက်စေခြင်းရှိ / မရှိဆိုသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်၎င်းအားစမ်းသပ်ရန်နှင့်ဆေးခြောက်သုံးရန်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခြောက်ပင်ကိုအလုပ်မှထုတ်ပယ်ခြင်းခံရသည်။ မင်းအိမ်မှာဆေးခြောက်သုံးနေတယ်ဆိုရင်မင်းလုပ်နိုင်တာအကောင်းဆုံးကအမြင့်ကိုအလုပ်လုပ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ဆေးခြောက်သုံးတာကိုခွင့်မပြုတာဘဲ။
CBD သည်ကုသမှုတစ်ခုအဖြစ် FDA ထောက်ခံချက်ရှိပါသလား။
CBD ထုတ်ကုန်များသည်မည်သည့်ဖျားနာမှုရောဂါများကိုမဆိုကုသရန် FDA မှမစမ်းသပ်ရသေးပါ။ CBD သည်မထိရောက်ဟုမဆိုလိုပါ၊ ၎င်းသည်လူများအားမည်သည့်ရောဂါများကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန်သို့မဟုတ်ကုသနိုင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာတောင်းဆိုမှုများကိုခွင့်မပြုပါ။ သင် CBD ကိုကောင်တာပေါ်မှအလွယ်တကူ ၀ ယ်နိုင်သော်လည်းနာကျင်မှုသို့မဟုတ်အခြားဆေးဘက်ဆိုင်ရာပြဿနာများအတွက်အသုံးမပြုမီသင်၏ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်သင့်သည်။
မူလက https://www.medicalnewstoday.com/articles/cbd-oil-for-skin တွင်တင်ခဲ့သည်
Cannabidiol (CBD) သည်ဆေးခြောက်ပင်မှရရှိသောသဘာဝဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အချို့အထောက်အထားများက CBD ဆီသည်အရေပြားကျန်းမာရေးအတွက်အကျိုးပြုပြီးအရေပြားအခြေအနေအမျိုးမျိုးအတွက်သုံးသည်ဟုထောက်ပြသည်။
CBD သည်ဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုဖြစ်သည် ဆေးခြောက် Sativa အပင်။ ထုတ်လုပ်သူများသည် CBD အားလျှော်ဆီသို့မဟုတ်အုန်းဆီကဲ့သို့ CBD ဆီနှင့်ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။ လူများသည် CBD အဆီ (သို့) CBD အဆီပါ ၀ င်သောအလှကုန်ပစ္စည်းများကိုသူတို့၏အရေပြားပေါ်တွင်သုံးနိုင်သည်။
၎င်း၏အလားအလာရှိသောရောင်ရမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်သောဂုဏ်သတ္တိများကြောင့် CBD သည်ဝက်ခြံ၊ နှင်းခူနှင့် psoriasis အပါအ ၀ င်အရေပြားအခြေအနေများကိုကုသရာတွင်အသုံးဝင်လိမ့်မည်။
ဤဆောင်းပါး၌ CBD အဆီသည်အဘယ်အရာ၊ အသားအရည်အတွက်မည်သို့အသုံးဝင်နိုင်သနည်း၊ CBD အဆီကိုမည်သို့သုံးရမည်ကိုဆွေးနွေးပါမည်။
CBD သည်တရားဝင်လား။ THC ၀.၃% ထက်နည်းသော CBD ထုတ်ကုန်များသည်တရား ၀ င်ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံဖြစ်သော်လည်းအချို့သောပြည်နယ်ဥပဒေများအရတရားမ ၀ င်ပါ။ ဆေးခြောက်မှရရှိသော CBD ထုတ်ကုန်များသည်အခြားဖက်ဒရယ်နိုင်ငံများတွင်တရားမ ၀ င်သော်လည်းအချို့ပြည်နယ်ဥပဒေများအရတရားဝင်သည်။ အထူးသဖြင့်ခရီးသွားတဲ့အခါပြည်တွင်းဥပဒေကိုစစ်ဆေးပါ။ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေး ဦး စီးဌာန (FDA) သည်မတိကျသောတံဆိပ်တပ်ထားသော CBD ထုတ်ကုန်များကိုအတည်မပြုပါ။.
CBD သည်ဆေးခြောက်ပင်တွင်တွေ့ရသော cannabinoids များစွာထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ နောက်ထပ်ထင်ရှားသော cannabinoid သည် delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) ဖြစ်သည်။ THC သည်လူများသည်ဆေးခြောက်နှင့်ပေါင်းသင်းနိုင်သော“ မြင့်မားမှု” အတွက်တာဝန်ရှိသည်။ CBD တစ်ခုတည်းကလူတစ်ယောက်ကိုမြင့်မားတဲ့ခံစားချက်မဖြစ်စေပါဘူး။
CBD နှင့် THC အကြားခြားနားချက်များကိုဤနေရာတွင်ပိုမိုလေ့လာပါ။
ဆေးခြောက်ပင်များ၏ကွဲပြားသောမျိုးကွဲများတွင်ကွဲပြားသော cannabinoids အဆင့်များပါ ၀ င်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်လျှော်ပင်များတွင် CBD နှင့် THC မရှိသလောက်နီးပါးပါ ၀ င်သည်၊ ထို့ကြောင့် CBD ဆီအများစုသည်စက်မှုလျှော်မှဖြစ်သည်။
လျှော် CBD နှင့်ဆေးခြောက် CBD အကြားခြားနားချက်များကိုဤနေရာတွင်ပိုမိုလေ့လာပါ။
အများအားဖြင့်ထုတ်လုပ်သူများသည်ဆေးခြောက်စက်ရုံမှ CBD ကိုထုတ်ယူရန်အပူကို သုံး၍ ၎င်းကို CBD ဆီထုတ်လုပ်ရန်သယ်ဆောင်သောဆီနှင့်ရောပါလိမ့်မည်။ အခြားသူများကဖန်တီးရန်အရက်ကိုသုံးနိုင်သည် CBD tincture.
CBD အဆီသည်ကွဲပြားခြားနားသောအားသာချက်များစွာ ရှိ၍ လူများသည်၎င်းကိုနည်းလမ်းများစွာဖြင့်သုံးနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၎င်းတို့ကိုအရေပြားပေါ်တွင်တိုက်ရိုက်လိမ်းခြင်း၊ လျှာအောက်သို့တစ်စက်ထိုးခြင်း၊ သို့မဟုတ်လိမ်းဆေးသို့မဟုတ် lotion ထဲသို့ထည့်နိုင်သည်။
လူ့ခန္ဓာကိုယ်တွင် endocannabinoid receptor system (ECS) ဟုလူသိများသော neurotransmitters များနှင့် cannabinoid receptors များရှုပ်ထွေးသောကွန်ယက်တစ်ခုပါ ၀ င်သည်။ယုံကြည်ရသောရင်းမြစ်မရ။ သုတေသနအရ cannabinoids နှင့် ECS သည်များစွာသောကိုယ်ခန္ဓာလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အခန်းကဏ္ and တစ်ခုပါဝင်နေပြီးအရေပြားကိုယုံကြည်ရသောအရာပါ ၀ င်သည် အရင်းအမြစ် cannabinoid အဲဒီ receptors ။
သုတေသနယုံကြည်ရသောရင်းမြစ် CBD အဆီသည်ကွဲပြားသောအရေပြားအခြေအနေများစွာအတွက်အကျိုးရှိနိုင်သည်ဟုအကြံပြုသည်။ ၎င်းတို့တွင်အောက်ပါတို့ပါဝင်နိုင်သည်။
ဝက်ခြံသည်အယုံကြည်ရဆုံးသောအရေပြားအခြေအနေဖြစ်သည် အရင်းအမြစ် လူသားများတွင် CBD တွင်အဆီလျှော့ချခြင်း၊ ရောင်ရမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်ခြင်းနှင့်ပိုးမွှား ၀ င်စေသောဂုဏ်သတ္တိများစွာပါ ၀ င်သောဒြပ်ပေါင်းများပါ ၀ င်သည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်လေ့လာမှုတစ်ခုကယုံကြည်တယ် အရင်းအမြစ် လူသား၏ sebocytes အပေါ် CBD ၏သက်ရောက်မှုကိုစူးစမ်းခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည်အရေပြားမှထုတ်လုပ်သောအဆီဓာတ်ဖြစ်သော sebum ကိုဖန်တီးသောဆဲလ်များဖြစ်သည်။
sebum သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အသားအရည်ကိုကာကွယ်ပေးသော်လည်း sebum အလွန်အကျွံထွက်ခြင်းကြောင့်လည်း ၀ က်ခြံဖြစ်စေနိုင်သည်။ လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ CBD သည် sebocytes များအလွန်အကျွံ sebum မဖြစ်ပေါ်အောင်တားဆီးနိုင်သည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်သုံးသပ်ချက်ကိုယုံကြည်ပါ အရင်းအမြစ် ဆေးခြောက်ပင်၏အလားအလာရှိသော antibacterial နှင့် antifungal ဂုဏ်သတ္တိများကိုမှတ်သားသည်။ ၎င်းသည်အရေပြားပေါ်ရှိပိုးမွှားများကြောင့် ၀ က်ခြံများကိုကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ်လေ့လာမှုတစ်ခုအရ CBD သည်ဝက်ခြံအမာရွတ်များကိုကုသရာတွင်အကျိုးရှိနိုင်သည်ဟုအကြံပြုသည်။
A 2019 လေ့လာမှုယုံကြည်စိတ်ချရ အရင်းအမြစ် CBD သည်အရေပြားခြောက်သွေ့ခြင်းနှင့်ယားယံခြင်းကဲ့သို့သောအဖြစ်များသောလက္ခဏာအချို့ကိုကုသရာတွင်အသုံးဝင်လိမ့်မည်ကိုသတိပြုပါ။ ရောင်ရမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်သောဂုဏ်သတ္တိရှိသည် အရင်းအမြစ် CBD ၏နှင်းခူ၊ အရေပြားရောင်ရမ်းခြင်းနှင့် psoriasis ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအစပျိုးမှုများကိုလျှော့ချရန်အထူးအသုံးဝင်သည်။
CBD ဆီသည်အသားအရေကိုနူးညံ့စေပြီးယားယံခြင်းကိုသက်သာစေသည်၊ ၎င်းသည်ထိခိုက်လွယ်သောအသားအရေရှိသူများအတွက်အသုံးဝင်လိမ့်မည်။
CBD နှင့် psoriasis အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
၂၀၁၄ ခုနှစ်လေ့လာမှုတစ်ခုကယုံကြည်တယ် အရင်းအမြစ် CBD ၏ antioxidant ဂုဏ်သတ္တိများကိုမီးမောင်းထိုးပြသည်။ oxidative စိတ်ဖိစီးမှုယုံကြည်ရသောရင်းမြစ် အိုမင်းရင့်ရော်မှုဖြစ်စဉ်ကိုအထောက်အကူပြုနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် antioxidant နှင့် anti-inflammatory ဂုဏ်သတ္တိများကိုယုံကြည်ကြသည် အရင်းအမြစ် CBD ၏အရေပြားသည်အိုမင်းရင့်ရော်မှုကိုကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။
ဆေးခြောက်ပင်သည်ယုံကြည်အားထားမှုတွင်ပါဝင်နိုင်သည် အရင်းအမြစ် antibacterial နှင့် antifungal ဂုဏ်သတ္တိများပါ ၀ င်သောကြောင့်အရေပြားပေါ်ရှိရောဂါများကိုကုသရာတွင်အသုံးဝင်လိမ့်မည်။
CBD နှင့်ပတ်သက်သောနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များနှင့်အရင်းအမြစ်များအတွက် CBD skincare ပစ္စည်းများ၊ ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ကပ်အပ်နှံထားသောဗဟိုသို့သွားပါ။
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) ၏အဆိုအရယုံကြည်ရသောရင်းမြစ်လူများသည် CBD ကိုကောင်းစွာသည်းခံလေ့ရှိသည်။ သို့သော်ဆေးထိုးမှီခိုနိုင်သည့် CBD ၏အချို့သောဘုံဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတွင်ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သည် အရင်းအမြစ်:
CBD သည်အပြန်အလှန်အကျိုးပြုနိုင်သည်ကိုသတိပြုသင့်သည် ယုံကြည်ရသောရင်းမြစ် အချို့သောဆေးဝါးများနှင့်အတူ၊ ထို့ကြောင့်လက်ရှိဆေးညွှန်းဆေးဝါးများသောက်သုံးနေသောသူများသည်မည်သည့် CBD ထုတ်ကုန်ကိုမဆိုအသုံးမပြုမီသူတို့၏ဆရာဝန်နှင့်ဆွေးနွေးရန်အရေးကြီးသည်။
မည်သည့် CBD ထုတ်ကုန်နှင့်မဆို၊ ကုန်ပစ္စည်းကိုမည်မျှသုံးရန်နှင့်မည်သို့သုံးရမည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်တံဆိပ်နှင့်ထုပ်ပိုးမှုလမ်းညွှန်ချက်များကိုလိုက်နာရန်အရေးကြီးသည်။
လူများသည် CBD ဆီပါ ၀ င်သော CBD အဆီနှင့်အလှကုန်ပစ္စည်းများကိုလိမ်းနိုင်သည်။
CBD အဆီကိုပါးစပ်မှယူရန်လူများသည်သူတို့၏လျှာအောက်တွင်စက်အနည်းငယ်မျိုချနိုင်ပြီး၎င်းတို့သည်အစာကိုမျိုချမီ ၁ မိနစ်အထိထိန်းထားနိုင်သည်။
လူတစ် ဦး ၏ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်နှင့် CBD ဆီ၏အာနိသင်ပေါ် မူတည်၍ သောက်သုံးသောပမာဏကွဲပြားလိမ့်မည်။ CBD မှလူအသစ်များသည်ဖြစ်နိုင်ချေအနည်းဆုံးပမာဏနှင့်စတင်သင့်သည်။ သူတို့သည်သူတို့၏ခန္ဓာကိုယ်သည် CBD အားမည်သို့တုံ့ပြန်သည်ကိုသိသည်နှင့်သူတို့သည်ဆေးပမာဏကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးနိုင်သည်။
အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေး ဦး စီးဌာန (FDA)ယုံကြည်ရသောရင်းမြစ် လောလောဆယ် CBD ထုတ်ကုန်များကိုမထိန်းချုပ်ပါ။ ထို့ကြောင့်လူများသည် CBD ဆီထုတ်ကုန်များကိုရှာဖွေရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသည်။
၀.၃% ထက်မပိုပါယုံကြည်ရသောရင်းမြစ် THC သည်စိုက်ပျိုးရေးတိုးတက်ရေးဥပဒေအရယုံကြည်ရသောရင်းမြစ်
ISO/IEC 17025 အသိအမှတ်ပြုဓာတ်ခွဲခန်းမှတတိယအဖွဲ့အစည်းစမ်းသပ်ခြင်း၏အထောက်အထားရှိသည်
ပိုးသတ်ဆေးများ၊ သတ္တုများ၊ မှိုနှင့်ရောဂါပိုးမွှားများအတွက်စမ်းသပ်မှုများအောင်မြင်သည်
FDA သတိပေးစာကိုယုံကြည်ရသောကုမ္ပဏီတစ်ခုမှမဟုတ်ပါ အရင်းအမြစ်
သူတို့ထုတ်ကုန်တွေအားလုံးအတွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုလက်မှတ် (COAs) တွေထုတ်ပေးတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကနေ
ရှားစောင်းလက်ပတ်သည်အလွန်အစွမ်းထက်သောအစိုဓာတ်ဖြည့်ပေးပြီးရောင်ရမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်သော၊ ပိုးမွှားကျရောက်မှုနှင့်အနာကျက်စေသောဂုဏ်သတ္တိရှိသည်။ ၂၀၁၄ နှင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်လေ့လာမှုများအရရှားစောင်းလက်ပတ်သည်ဝက်ခြံနှင့် psoriasis နှစ်ခုလုံး၏လက္ခဏာများကိုလျော့ချပေးနိုင်သည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်သုံးသပ်ချက်ကိုယုံကြည်ပါ အရင်းအမြစ် ပျားရည်ကအစိုဓာတ်ထိန်းပေးတာ၊ ရောင်ရမ်းနာကျင်တာနဲ့ရောင်ရမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်တဲ့ဂုဏ်သတ္တိတွေပေးခဲ့တယ်ဆိုတာသတိပြုပါ။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်သုံးသပ်ချက်တစ်ခုက၎င်းသည်ခုခံအားစနစ်ကိုမြှင့်တင်နိုင်ကြောင်း၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်သုံးသပ်ချက်ကိုယုံကြည်သည် အရင်းအမြစ် ပျားရည်သည်အပူလောင်ခြင်းနှင့်ဒဏ်ရာများကိုကုသပေးနိုင်ကြောင်းညွှန်ပြသည်။
၂၀၁၆ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ယုံကြည်ရသောရင်းမြစ် အုန်းဆီသည်အသားအရေခြောက်သွေ့ခြင်းကိုသိသိသာသာတိုးတက်စေသောကြောင့်အုန်းဆီသည်ထိရောက်သောကုသမှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်လေ့လာမှုတစ်ခုအရအုန်းဆီသည်ရောင်ရမ်းမှုကိုတိုက်ထုတ်ခြင်းနှင့်အရေပြားအတားအဆီးများ၏ကျန်းမာရေးကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေကြောင်းမှတ်သားနိုင်သည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်သုံးသပ်ချက်ကိုယုံကြည်ပါ အရင်းအမြစ် လက်ဖက်ပင်ဆီ၏ anti-inflammatory, antibacterial နှင့်အနာကျက်စေသောဂုဏ်သတ္တိများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်သုံးသပ်ချက်တစ်ခုအရလက်ဖက်ပင်ဆီသည် ၀ က်ခြံများအတွက်ထိရောက်သောကုသမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးအပျော့စားမှအလယ်အလတ်ရှိသော ၀ က်ခြံရှိသောသူများအတွက်ဝက်ခြံအနာပေါက်ခြင်းကိုလျော့ကျစေသည်။
သုတေသနအရ CBD ဆီကိုဝက်ခြံ၊ အရေပြားရောင်ရမ်းခြင်းနှင့် psoriasis ကဲ့သို့အရေပြားအခြေအနေအမျိုးမျိုးအတွက်ကုသမှုတစ်ခုအဖြစ်သုံးခဲ့ဖူးသည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏ရောင်ရမ်းဆန့်ကျင်မှု၊ antibacterial နှင့် antioxidant ဂုဏ်သတ္တိများကြောင့်ဖြစ်သည်။
လူများသည် CBD အဆီကိုသူတို့၏အသားပေါ်တွင်တိုက်ရိုက်လိမ်းနိုင်သည်၊ ၎င်းကိုလောင်ကျွမ်းနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် CBD အဆီပါ ၀ င်သောလိမ်းဆေးများသို့မဟုတ်လိမ်းဆေးကဲ့သို့လိမ်းဆေးများကိုသုံးနိုင်သည်။
* ဤထုတ်ပြန်ချက်များကိုအစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့ကအကဲဖြတ်ထားခြင်းမရှိပါ။ ဤထုတ်ကုန်များသည်ရောဂါရှာဖွေရန်၊ ကုသရန်၊ ပျောက်ကင်းရန်သို့မဟုတ်ကာကွယ်ရန်မရည်ရွယ်ပါ။
အင်တာနက်ပတ် ၀ န်းကျင်မှ Delta 8 THC နှင့် Delta 10 THC အကြောင်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဖြေများ
WEBMD၊ ဆေးသိပ္ပံပညာနှင့် Youtube မှဆောင်းပါးများသည် Delta 8 THC, Delta 10 THC, CBD, CBD များအတွက် Skin Care & CBD အတွက်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များအတွက် CBD